Mari-pototra ny fisian’ny tamban-jotrana mpangalatra omby eto Mahajanga | Région Boeny
Io no voalzan’ny Komandin’ny vondron-tobim-paritanin’ny Zandarimariam-pirenena eto Mahajanga ny Kly Rabearison Charles raha nanao tatitra tamin’ny vahoaka tamin’ny haino aman-jery ny tenany ny Alakamisy 28 mai 2015 mikasika ny fisian’ny tamban-jotrana mpangalatra omby eto Mahajanga.
Nanazava izy fa efa misy tokoa ankehitriny eto Mahajanga ny tamban-jotrana mpangalatr’omby ary efa maro ireo mpikambana ao anatiny no tratra. Eo am-pitadiavana ny ati-doha mikotrika azy ity ny Zandary eto an-toerana. Efa misy ny vaovao azo momba io raharaha io hoy izy ary efa eo am-piketrehana ny vela-pandrika ry zareo ankehitriny.
Ny Alakamisy 27 mai 2015 dia mpangalatra omby roalahy indray no tratra. Miisa telo ireo omby nangalariny ary teny amin’ny Fokontanin’Ambondrona, kaomina Mahajanga tampon-tanàna no nahavery azy ireto. Mialoha izay dia efa nisy ny fitarainana tao amin’ny Tobim-paritry ny Zandarimarian’i Mahajanga nataon’ny tompon’omby. Rehefa natao ny fanarahan-dia dia nifarana tao Belobaka, distrikan’i Mahajanga II izany, ka teo no niainga ny fanadihadihana hoy hatrany ny Kly.
Olona tsara sitra-po iray no nahafantarana fa misy olona mivarotra omby ao Marovato, ao Belobaka ihany ka natao ny fakana ny vaovao rehetra momba ireto mpivarotr’omby ireto. Rehefa voaporofo fa omby halatra tokoa no kasain’izy ireo hamidy dia natao ny vela-pandrika. Ireo tompon’ny omby very ihany no nasaina nifampiraharaha mivantana tamin’ireo mpanera ka dia noraisim-potsiny izy ireo sy ireo jiolahy nangalatra ny omby tany Ambondrona.
Porofo izao hoy ny Kly Rabearison Charles fa dia mihinana omby halatra isika mpanjifa hena omby eto Mahajanga satria dia saika alefan’ireo mpangalatra azy io eny amin’ny toeram-pamonoan’omby avokoa ireo omby halatra rehetra ireo. Notsipihiny fa tsy ny mpivaro-kena rehetra nefa akory no miara-miasa amin’ity tamban-jotran’ny mpanglatra omby eto Mahajanga ity.
Nohamafisiny fa filamatr’izy ireo hoe « miaro ny vahoaka sy ny fananany » ka miezaka hatrany ny Zandarimaria miady amin’ny ratsy hoy izy ka ato ho ato dia hiroso amin’ny fisamborana ireo mpikambana ao anatin’ity tamban-jotra ity izy ireo. Izahay sy ny vahoaka dia efa vita mariazy hoy izy ka tsy maintsy amin’ny alàlan’ny fiara-miasa amin’izy ireo no hanatanterahana izany.
Hatolotra ny fitsarana ny faran’ity herinandro ity ireo mpangalatra omby roalahy aorian’ny fanadihadiana azy ireo.
Zandarimariam-pirenena eto Boeny: sehatra mahomby fanaovana fampiharana
Fa tamin’io fotoana io ihany koa no nampahafantaran’ny Kly Rabearison Charles ny fahatongavan’ireo
zandary andiany faha-39 avy ao amin’ny Corps d’Application des Officiers (CAO), izay manamboninahitra vao nahavita fianarana ka tonga hanao fampiharana mandritra ny roa herinandro eto an-drenivohitr’i Boeny. Ampahatsiahivina fa any Moramanga izy ireto no mianatra sy miofana ho Zandary ary izao tonga Mahajanga izao manohy ny fianarany taorian’ny fiofanana tany an-toerana. Sivy mianadahy izy ireo, telo vehivavy ary enina lehilahy.